Opinions and Feelings.......: January 2010
Passing Time at Xam Time... :)
Posted by itsmysite at 3:03 AM 1 comment: Links to this post
जीवन, मृत्यु अनी एक साहित्य
भावनालाई कसेर राख्ने हो भने शायद विश्वका महान साहित्यकारको जन्म कहिले हुने थिएन। सेक्शपीयर हुन या देवकोटा, चाहे जेन अस्टिन हुन कि पारिजात्, भावना कलम माथि हावी भएपची नै उनका रचना पढिए। अनौठो रहेछ मानिसको जात पनी, नलेखीएका भावना भावना होइनन, लेखिएक चै खरा साहित्य- मानवीय भावनाको प्रतिबिम्ब!
यही कुरा आज निहिताको मनमा जरो गाढेर बसेको छ, त्येसैले कहिले मनमा नआउने कुरा पनि कलम सँगै निस्स्रित हुँदैछ। अचम्मकै कुरा भन्नुपर्ला उसले आज आफु भित्रको प्रतिभालाई नजानेरै पत्ता लगाई। मर्नु अगाडि मानिस अमर हुन चाहन्छ रे, आज उसलाई पनि त्यस्तै लगेको छ। सुर्योदयमा सुरु भएको उसको 'भावना' पोख्ने मेलोले उसलाई सुर्यस्त सम्मा साथ् देला नदेला त्यस्को टुँगो कसैले लगाउन सकेको छैन। आज ऊ डम्म ढोका थुनेर कोठामा गुम्सिएकी छ- आफ्न गुम्सिएका पिडा कागजमा थोपार्न।
हुन त लेख्नु नै ठुलो कुरा हैन- मेरा कुरा म बोलेरै ब्यक्त गर्छु। तर निहिताको लागि त्यो सम्भव छैन। ऊ सँग आवाज छैन... केवल कलम छ।
दिनभरमा उसले शायद ८ ९ पन्ना लेखी होला तर रुदै लेखिएका अक्ष्यरहरुलाई उस्का अस्रुधाराले बगाइरहेका थिए। जस्तै सुख पाएका मानिसको मनमा पनि एक किसिमको पिडा लुकेको हुन्छ भन्ने सुनेको थिए, हंसिलो देखिन खोज्ने निहिता पनि त्यस्तै रहिछ। उस्का ति निस्प्रिह अभिब्यक्ती आज अक्ष्यर भएर कागज भरी छरिएका छन्। भावावेशमा आएर कोरिएका उस्का अभिब्यक्ती उस्को प्रतिबिम्ब भएको छ आज।
निहिता पासित थिई, आफ्नै दुनियाँमा अल्झिएकी। न त ऊ बोल्न सक्थी न त सुन्न नै। बिधाताले उस्लाई ठगेको थियो, हिजो फेरी एकपल्ट ठगिई ऊ- त्यसपछी अब्यक्त पिडालाई थाती रखेर जिवन समाधी लिने निर्णय गरी। समाजले सधैं सहानुभुति देखायो ऊ माथि तर त्यही समाजका माम्सपिचासले आज उसको जीवनलाई नर्क म धकेलेका छन्। कमजोरिको फाईदा लिने परजीविले निहिताको असक्ष्यमताको फाईदा उठाए। सहनसिलताको पनि सिमाना हुन्छ तर आज त्यो क्ष्मता पनि हराईसकेकोछ निहिताबाट। त्यसैले आफ्नो क्ष्यत बिक्ष्यत मन र शरीर लिएर उसले कलम समाती। मनका अनेक भावलाई शब्दमा कोरी, ऊ जस्तै निहिताहरुको प्रतिबिम्ब बन्यो त्यो भावना अनी उसको अमर हुने इच्छा सुर्यास्त पछी पनि अक्ष्यर सँगै रहिरह्यो- निहिता रहिन तर पनि नयाँ साहित्यको जन्म भयो।
Posted by itsmysite at 5:23 PM5comments: Links to this post
कुहिरोले ढाकेको क्षितिज
निलो आकाशलाई डम्म ढाकेको छ
आज बाक्लिएको छ त्यो सेतो कुहिरो
न त आज सूर्यदेवको दर्शन पाइयो
न त अस्ताएकै देख्न पाउने छाँट्काँट छ
हिमाललाई पनि डम्म ढाकेको छ फुस्फुसे हिउँले
चिसो बतास तल तल जाडोको सन्देश प्रवाह गर्दै छ
सधैँ सन्देश ल्याउँथ्यो त्यो कालो कौवा
कुहिरोमा त्यसले पनि बाटो बिराए जस्तो छ
सुख्खा भएको छ धर्ती अनि
उब्जाउ गर्न असमर्थ, पट पट फुटेको छ
तल घरमा बस्ने कान्छी दिदी पनि त्यस्तै भएकी छिन
पट पट फुटेका गाला, चिसिएको मन अनि बाँझिएको शरीर!
प्रकृतिले त काँचुली फेर्छ पक्कै
यो माघे जाडो पछि न्यानो चैत आउँछ नै
कान्छी दिदिको फराकिलो क्षितिजलाई भने सधैँ कुहिरोले ढाक्ने छ
क्षितिज पारि बाट नआउने भए कान्छा दाइ!
Posted by itsmysite at 5:22 PM No comments: Links to this post
कुनै पर्वत हो त्यो धर्तीको
जसको मुहान बाट धारा प्रवाह जल बहन्छ
आफ्नो बाटो अघि लाग्छ निरन्तर
प्यासी परजीविको प्यास मेटाउँछ
अग्ला होचा, खस्रा अनि कोमल सतह
सबै पार गर्छं
केही थोपा जल त्यही भूमिको
उडेर जान्छ, फेरि जल बनेर बर्षन्छ
धर्ती हो नारी अनि नारी हो धर्ती
दुबै को सतह हदै सम्म समान हुन्छ
दुबै हुन् सिर्जना र सुन्दरताका खानी
दुबैको गहिराइमा रहस्य लुकेको हुन्छ
Posted by itsmysite at 5:20 PM No comments: Links to this post
त्यो कालो अँधेरी रात
लगातारको झरी अनि गड्गडाउँदो बादल
चिसो हावा सँगै उडेका पर्दा
त्यही सँगै उडिगयो एक सपना
निधार माथि टक्क काटिएको सिउँदो
त्यसमै सजाएको विवाहिताको निशानी सिन्दूर
कमलो हातमा सजाएका काँचका चुरा
तर कठोर मनका विधाता भए निष्ठुर
त्यो सिन्दूर त्यही एकदिनको रह्यो
पुछियो सिन्दूर सँगै मुहारको हर चमक
टुक्रा टुक्रा भए सपना काँचको चुरा जस्तै
अनि छरपस्ट भयो जीवनको हर क्षण………
Posted by itsmysite at 5:17 PM No comments: Links to this post